Ukuqulunqa iimbono ezibangelwa le nto
Inkolelo efanayo ukuba uhlanga lungaqhekeka kwiintlobo ezintathu: i-Negroid, i-Mongoloid neCaucasoid . Kodwa ngokwezesayensi, akunjalo. Nangona i-American concept of race yabuya ngasekupheleni kwe-1600 kwaye iqhubeka nanamhlanje, abaphandi ngoku bathi akukho nzisululwazi zohlanga. Ngoko, yintoni kanye ubuhlanga , kwaye yintoni imvelaphi yayo?
Ubunzima bokuQalisa abantu kwiindawo
Relethford, umbhali weZiqulatho ze -Biological Anthropology , uhlanga "liqela labantu ababelana ngeempawu ezithile zezinto eziphilayo ... .Abantu bahluke kwezinye iindidi zabantu ngokubhekiselele kule mimpawu."
Izazinzulu ziyakwazi ukwahlula ezinye iindidi kwiintlanga zobuhlanga zilula kunabanye, njengalezo ezihlala zodwa kwiindawo ezahlukeneyo. Ngokwahlukileyo, imbono yobuhlanga ayisebenzi kakuhle nabantu. Kungenxa yokuba abantu abahlali kuphela kwiindawo ezahlukeneyo zeendawo, baphinde babuye baphinde baphume phakathi kwabo. Ngenxa yoko, kukho umlinganiselo ophezulu wokugeleza kwemfuza phakathi kwamaqela abantu abenza nzima ukuwahlela kwiindidi ezidibeneyo.
Umbala wesikhumba uhlala uyingxaki ephambili yabaseNtshona basebenzisa abantu ukubeka abantu kwiintlanga. Nangona kunjalo, umntu ondlu lwaseAfrika unokuba ngumthunzi ofanayo njengelinye ilanga lomntu waseAsia. Umntu othile waseAsia unokuba ngumthunzi ofanayo nanjengomntu waseYurophu.
Uhlanga olunye luphela phi na olunye luqala?
Ukongeza kwimibala yesikhumba, iimpawu ezinjengobumba beenwele kunye nesimo sombuso sele sisetyenziselwe ukuhlukanisa abantu kwiintlanga. Kodwa amaqela amaninzi abantu akakwazi ukwahlulwa njengeCaucasoid, Negroid okanye iMongoloid, imigaqo engabonakaliyo esetyenziselwa ukuba kuthiwa iintlanga ezintathu. Thabatha abantu baseAustralia, ngokomzekelo.
Nangona ngokuqhelekileyo kunesikhumba-mnyama, bavame ukuba neenwele ezisezantsi ezidla ngokukhawuleza.
"Ngokwembala yesikhumba, sinokulingwa ukuba sibhale aba bantu njenge-Afrika, kodwa ngesiseko seenwele kunye nesimo sombuso bangabalwa njengeYurophu," uRelethford ubhala. "Enye indlela kuye kwaba ukudala isigaba sesine, 'iAustralia.'"
Kutheni enye iqokelela abantu ngohlanga olubunzima? Ingcamango yobuhlanga ibonisa ukuba ukuhlukahluka kohlobo lwezinto eziphilayo kuhamba ngokulandelanayo kunokuba kulungelelaniso lwangaphakathi xa kuqhathaniswa nenyaniso. Kuphela malunga neepesenti ezili-10 zokwahluka kwabantu phakathi kwezinto ezibizwa ngokuba yiintlanga. Ngoko ke, uluhlu lobuhlanga lwasuka njani eNtshona, ngakumbi eMelika?
Imvelaphi yeRace eMelika
I-Amerika yasekuqaleni kwekhulu le-17 yayininzi iindlela ezininzi eziqhubekayo kunyango lwabantu abamnyama kunokuba ilizwe liza kubakho kwiminyaka emashumi ezayo. Kwiminyaka yokuqala ye-1600, abantu base-Afrika baseMelika bangathengisa, bathathe inxaxheba kumatyala enkundla baze bafumane umhlaba. Ubukhoboka obusekelwe kubuhlanga abukho.
U-Anthropologist u-Audrey Smedley, umbhali weRace eNyakatho Melika, uthi: "Kwakukho into enjalo ngokobuhlanga." Ingqungquthela ye-Worldview , kwintetho ye-PBS ka-2003. "Nangona 'uhlanga' lwalusetyenziselwa njengegama eliqhelekileyo ngolwimi lwesiNgesi , njengokuthi 'uhlobo' okanye 'uhlobo' okanye 'luhlobo, aluzange lubhekiselele kubantu njengamaqela.'
Nangona ubukhoboka obusekelwe kubuhlanga bekungekona umkhwa, ubukhoboka obungenakunyulwa. Abakhonzi abanjalo babeba yiYurophu enkulu. Ngokubanzi, abantu abaninzi base-Ireland bahlala ebukhosini eMelika kunamaAfrika. Ngaphezu koko, xa abasebenzi baseAfrika nabaseYurophu behlala kunye, ukuhluka kwabo kumbala wesikhumba akuzange kube ngumqobo.
"Babedlala kunye, babela kunye, balala ndawonye ... Umntwana wokuqala we-mulatto wazalwa ngo-1620 (omnye unyaka emva kokufika kwabokuqala baseAfrika)," kusho uSmedley.
Ngezihlandlo ezininzi, amalungu omsebenzi weklasti-yaseYurophu, e-Afrika kunye nohlanga-edibeneyo-avukela kumnini-mhlaba olawulayo. Uloyiko lokuba inxalenye yabasebenzi behlangene yayiza kubamba amandla abo, abanini-mhlaba bahlukanisa abantu baseAfrika abavela kwezinye izicaka, abadlulayo imithetho eyahlula abo baseAfrika okanye amaNative American.
Ngeli xesha, inani labakhonzi baseYurophu lancipha, kwaye inani labakhonzi base-Afrika laphakama. Abantu baseAfrika babe nezakhono kwezobugcisa ezifana nokulima, isakhiwo, kunye nezetsimbi ezenza abazalwana abafunayo. Kungekudala, abantu baseAfrika babhekwa kuphela njengezigqila kwaye, ngenxa yoko, phantsi komntu.
Ngokuphathelele abantu baseMelika, babenomdla omkhulu ngabantu baseYurophu, abachazela ukuba behla kwiintlanga ezilahlekileyo zakwaSirayeli , bachaza umbhali-mlando uTheda Perdue, umbhali we- Indix Blood Indians: Ukwakhiwa kobuhlanga kwi-Early South , kwi-interview ye-PBS. Le nkolelo yayithetha ukuba amaMerika aseMelika ayefana nabaseYurophu. Baye bamkela indlela eyahlukeneyo yobomi ngenxa yokuba babehlukane nabaseYurophu, i-Perdue posits.
"Abantu bekhulwini le-17 ... babekho amathuba okuhlula phakathi kwamaKristu kunye namahedeni kunokuba babephakathi kwabantu abemibala kunye nabantu abamhlophe," kusho uPerdue. Ukuguquka kwamaKristu kunokukwenza ukuba amaNdiya aseMelika aphelele ngokupheleleyo abantu, bacinga. Kodwa njengabantu baseYurophu bazama ukuguqula nokulinganisa abaNtu, ngexesha lonke bebamba umhlaba wabo, kwenziwa iinzame zokubonelela inzululwazi yokuba abantu base-Afrika baxhomekeke kwi-Europe.
Ngama-1800, uDkt. Samuel Morton wathi ukungafani kobuhlanga phakathi kweentlanga kunokulinganiswa, ngokugqithiseleyo kubungakanani bobuchopho. Umlandeli ka-Morton kule ndawo, uLouis Agassiz, waqala "ukuphikisa ukuba abantu abamnyama abaphantsi nje kuphela kodwa ziintlobo ezahlukeneyo," kusho uSmedley.
Ngenxa yentuthuko yesayensi, ngoku sinokuthi ngokucacileyo ukuba abantu abanjengoMorton no-Aggasiz bayangalunganga.
Uhlanga lukhuhlane kwaye ngoko kunzima ukuyiqonda ngokwesayensi. "Uhlanga luyingcamango yengqondo yabantu, kungekhona yendalo," uRelethford ubhala.
Ngelishwa, le ngcamango ayifumananga ngokupheleleyo ngaphandle kwimijikelezo yesayensi. Sekunjalo, kukho iziganeko eziye zaguquka. Ngo-2000, ubalo lwabantu base-United States bavumela amaMerika ukuba abonakale njengezizwe ngezizwe okokuqala. Ngolu tshintsho, uhlanga lwavumela abemi balo ukuba badibanise imigca phakathi kwezinto ezibizwa ngokuba yiintlanga, ukuvula indlela yexesha elizayo xa ezo zigaba zingekho.
Imizekelo yoBuchule boBuchule kunye neengxaki
Isikhokelo sokuqonda nokuPhelwa koLwabiwo lweNkcubeko
I-Biography: uSir Isaac Isaac Newton